Iindaba -Ukuhlelwa kombhobho ongenamthungo
1. Ukuhlelwa ngendlela yemveliso
(1) Umbhobho ongenamthungo - umbhobho oshushu ojijekileyo, umbhobho obandayo obandayo, umbhobho obandayo obandayo, umbhobho we-extrusion, umbhobho we-jacking (2) umbhobho oshushu (a) Ngokwenkqubo-yombhobho wokuwelda i-arc, umbhobho wokunyusa umbane (amaza aphezulu, amaza asezantsi) umbhobho wegesi, i-welding pipe (b) ngokungqinelana nomgca we-welding-pipe echanekileyo ye-welding, i-spiral welding pipe.
A. Hot asongwe umbhobho sentsimbi ingenamthungo: eshushu liqengqiwe ngokuchasene ingqele liqengqiwe, nto leyo liqengqiwe ngezantsi lobushushu recrystallization.Hot lothuliweyo liqengqeleka ngaphezu kobushushu recrystallization.
I-Adavantage: inokuyitshabalalisa umbutho wokuphosa ingot, ukucoca ingqolowa yentsimbi kunye nokususa iziphene zesakhiwo esincinci, esenza ukuba iqela lesinyithi lisondele, ukusebenza komatshini kuphuculwe Olu phuculo lubonakaliswa ikakhulu kulwalathiso oluqengqelekayo, ukuze intsimbi ingabikho I-isotropic ende ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, amaqamza, ukuqhekeka kunye nokukhululeka okwenziwe ngexesha lokuthulula kunokudityaniswa phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo.
B. umbhobho wentsimbi oqengqelekileyo obandayo: Ingqele eqengqwe ngombhobho engenamthungo (GB3639-2000) isetyenziselwa ulwakhiwo lomatshini kunye nezixhobo ze-hydraulic ezinokuchaneka okuphezulu kunye netafile
Ingqele ezotywe okanye ebandayo eqengqiwe ngokuchanekileyo iityhubhu zentsimbi ezingenamthungo ezinomphezulu wokugqiba.
Izinto eziluncedo: oko ukutshabalalisa isakhiwo bephosa yentsimbi ingot, acoce ingqolowa yesinyithi, kwaye ukuphelisa iziphene microstructure, ukuze microstructure intsimbi ibe compactness kunye neepropati ngoomatshini ziphuculwe. Olu phuculo ikakhulu kubonakala kwicala lothuli , ukuze intsimbi ingasasebenzi isotropic ukuya kwinqanaba elithile; amaqamza, ukuqhekeka kunye nokukhululeka okwenziwe ngexesha lokugalela nako kungadityaniswa phantsi kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo.
C. umbhobho wokufudumeza: Ityhubhu eshushu engenanto ibekwe kwisilinda evaliweyo ye-extrusion, kwaye intonga ebunjiweyo ihamba nentonga ye-extrusion ukwenza indawo ye-extrusion ikhuphe kwi-hole encinci yokufa.Le ndlela inokuvelisa umbhobho wentsimbi enobubanzi obuncinci.
I-Adavantage: Ngokuqina kwesinyithi kunye nobume obufanayo, kufanelekile ukuba kuveliswe phantse zonke iintlobo zetyhubhu zentsimbi, ngakumbi kwimveliso ye-alloy ephezulu, intsimbi engakhubazekiyo kunye nazo zonke iintlobo zeetyhubhu ezinqamlezileyo. Ngenxa yokusebenza kwayo, iimveliso zombhobho zensimbi ezikhutshelweyo zinamathuba okufaka isicelo endaweni engenakuphikiswa kwiindawo eziphambili kuqoqosho lwesizwe ezinje ngemizi-mveliso yasemkhosini, amandla enyukliya, amandla obushushu, inqwelomoya, ezemigodi, ioyile kunye noshishino lwepetrochemical. Imizamo yophando kunye nokuphuhlisa ukusebenza okuphezulu, umxholo wetekhnoloji ephezulu kunye nexabiso elongeziweyo leemveliso zombhobho zentsimbi ezishushu, ukukhuthaza ukuphuculwa kobugcisa bombhobho wesinyithi ophezulu kunye nokuqinisa ukomelela okubanzi kwezoqoqosho kubaluleke kakhulu
3. Ukuhlelwa ngokobume becandelo
(1) Iityhubhu zentsimbi zecandelo elilula - iityhubhu zentsimbi ezijikelezileyo, iityhubhu zetsimbi ezikwisikwere, iityhubhu zentsimbi ene-elliptic, iityhubhu zetsimbi ezingunxantathu, iityhubhu zentsimbi ezinamacala amathandathu, iityhubhu zentsimbi yedayimane, iityhubhu zentsimbi ezi-octagonal, iityhubhu zentsimbi ezinesangqa, kunye nezinye (2) iityhubhu zentsimbi zecandelo - iityhubhu zesinyithi ezingalinganiyo ezilinganayo, i-lobe ezintlanu ezimile okweentsimbi.
Ipayipi, ityhubhu yesinyithi ephindwe kabini, ityhubhu yentsimbi ebunjiweyo, ityhubhu yentsimbi, ityhubhu yentsimbi, ityhubhu yentsimbi, incubhu yentsimbi, abanye.
4. Ukwahlula-hlula ngobukhulu bodonga - ityhubhu yodonga lwentsimbi, ityhubhu yentsimbi eshinyeneyo.
5. Ulwahlulo ngokusetyenziswa - umbhobho, izixhobo ezishushu, ishishini ngoomatshini, ipetroleum, ukubhola kwejoloji, isikhongozeli, imboni yemichiza, injongo ekhethekileyo, abanye.